laacibfm.com » Tottenham Oo Guul-darro Kale Oo Xanuun Badan La Kulantay, Jose Mourinho Oo Xaajadu Ku Xun Tahay Iyo Wacdarihii Sheffield United
Kooxda layaabka xili ciyaareedkan ee Sheffield United ayaa cashar lama ilaawaan ah u dhigtay Jose Mourinho iyo kooxdiisa Tottenham waxaana jugtii ugu waynayd la soo gaadhsiiyay rajadii yarayd ee ay Spurs ka qabtay in ay kaalmaha sare ku dhamaysan karto.
Sheffield United ayaa Tottenham ku garaacday 3-0 waxayna kooxda Mourinho seegtay fursad ay aad ugu soo dhawaan lahayd kaalmaha sare ee Champions league loogu soo baxayo balse hadda waxay ka sii hoosayn doonaan Arsenal oo xalay guul gaadhay.
Dhinaca kale Sheffield United ayaa dib iskaga riixday Arsenal oo ka sii sare martay waxayna kooxdani muujisay in xili ciyaareedkii cajiibka ahaa ee ay soo qaadatay aanu wax la’aan ku dhamaanayn. Arsenal ayaa kaalinta 8 aad u dhacday halka Tottenham ay gashay kaalinta 9 aad.
Jose Mourinho iyo kooxdiisa Tottenham ayaa doonayay in ay sii baacsadaan kooxaha ay kula tartamayaan kaalmaha sare ee Champions League loogu soo baxayo kadib guuldarooyinkii soo gaadhay Chelsea iyo Leicester City laakiin Spurs ayaa la kulantay sheeko ayna markii hore filayn kadib markii ay Sheffield United sii waday wacdarihii ay xili ciyaareedkan ku soo jirtay.
Daqiiqadii 31 aad ayay ahayd markii ay xaalada Jose Mourinho iyo Tottenham xumaatay kadib markii ay Sheffield United la timid goolka furitaanka ee ay Spurs dhibaatada wayn u martay waxaana goolkan u saxiixay S. Berge waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Sheffield gool muhiim ah ku heshay.
WAALIDII VAR!! Saddex daqiiqo kadib markii ay Sheffield United goolka furitaanka heshay ayay Tottenham jawaab deg deg ah oo ay bixisay waxay ku dhalisay gool muran badan abuuray kaas oo uu Harry Kane dhaliyay.
Laakiin sharciga aan qaabka joogta ah lahayn ee kubbadaha cagta loo adeegsado ayaa noqday mid uu VAR murankii ugu waynaa ku abuuray iyada oo goolka Harry Kane loo diiday in Luka Moura oo dhulka ku dhacay ay kubbadu gacanta ka soo taabatay intii goolka laga soo shaqaynayay.
Jose Mourinho iyo kooxdiisa Tottenham ayay arintani ka degi wayday waxayna noqotay mid xaalad waali ah abuurtay laakiin wax walba oo uu Mourinho cadho muujiyay waxaa kooxdiisa Spurs laga diiday goolka ay ciyaarta ugu soo laabanayeen.
Qaybtii hore ee ciyaarta waxa ugu badan ee laga hadlayay waxa uu ahaa goolka Tottenham laga diiday iyo muranka joogtada ah ee lagala soo kulmayay marka ay kubbadu gacanta kaga dhacdo ciyaartoyda oo si loo raaco oo dhab ah la garan laayahay.
Laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta oo la filayay in ay Tottenham goolal deg deg ah keensan karto ayaa noqotay mid lama filaan ah iyada oo Sheffield United ay awooday in ay xaalada ku sii xumaysay Mourinho.
Daqiiqadii 69 aad xaalada Tottenham ayaa isku badashay musiibo iyo mid ka sii xun kadib markii ay Sheffield United dhalisay goolkooda labaad ee ay kalsoonida badan ku sii heleen waxaana goolka Mourinho wajigiisa sii badalay dhaliyay L. Mousset waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Sheffield hogaanka ku dheeraysatay.
Mourinho ayaa shaxdiisa isbadalo badan ku sameeyay si uu iskugu dayo in ay guuldarada iska badbaadiyaan laakiin kooxda layaabka xili ciyaareedkan ee Sheffield United ayaa Mourinho u diiday in uu wax farxad ah dareemo.
Daqiiqadii 84 aad waxaa si rasmi ah u soo dhamaatay rajadii yarayd ee Tottenham kadib markii ay Sheffield United la timid goolkeeda saddexaad waxaana baaqigii Mourinho iyo Spurs ka hadhsanaa dabaysha raaciyay O. McBurnie oo ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Sheffield United ku xasuuqayso Tottenham.
Harry Kane oo aan waligii Premier League gool kaga dhalin Sheffield United ayaa saddex jeer kubbada taabsiiyay shabaqa kooxdan laakiin dhamaan goolashan waa laga diiday inkasta oo mid ahaa kan ugu muranka badnaa.
Daqiiqadii 90 aad ugu danbayn Harry Kane ayaa gool sharci ah ka dhaliyay kooxda aanu hore gool ugaga soo dhalin Premier League ee Sheffield United kadib markii uu caawin ka helay Heung-Min Son waxayna ciyaartu noqotay 3-1 ay wali laba gool ku horayso Sheffield United.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Sheffield United ku sii xumaysay rajadii kaalmaha sare ee Tottenham waxayna hadda Spurs is arkaysaa iyaga oo 7 dhibcood hoos uga dhacay Man United iyo Wolves oo min 52 dhibcood haysta halka Tottenham ay leedahay 45 dhibcood.